Shirkadda Ugu Caansan Shirkaddaha Furniture-ka Somaliland Al- Nuur Oo Bushaarooyin Qiima Dhimis Lix Bilood Ah Iyo Fursado kale Oo Mihiim Ah Ku Baaqday – Araweelo News Network (Archive)
Hargeysa(ANN)Shirkadda AL-NUUR Furniture oo ah shirkad caan ka noqotay Somaliland, isla markaana keenta Aagabka Guryaha, Xafiisyada , Go’gosha, Hurdada, iyo gebi ahaanba waxyaabaha loo isticmaalo Hoyga ayaa shaacisay markii ugu horreysay fursado qiime-dhimis ah oo la xidhiidha
adeegyada qalanka ay iibiso.
Al-Nuuur Furniture oo adeegyada waxyaabaha ay iibiso kusoo bandhigtay Carwada Ganacsiga Somaliland ee ka socota Hotel Maansoor, ayaa si weyn uga dhexmuuqatay mudadii ay socotay bandhiga carwada ee ay Shirkadaha ganacsigu kusoo bandhigeen wax soo saarkooda iyo adeegyada ganacsi ee ay u qabtaan Bulshada Somaliland.
Mulkiilaha shirkadda ALNUUR Furniture Mr. Cabdiraxmaan Maxamed Nuur oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in cid kasta oo iska diiwaangelisa madasha ay carwadu ka socotaa heli doonto qiimo dhimis aad u weyn oo socon doonta lix bilood, taas oo uu ku tilmaamay mid fursad weyn ah oo ay ka faa’idaysan doonaan bulshadu.
Gudoomoyaha Shirkadda ALNUUR Furniture waxa uu sheegay inay bulshada u ballanqaadday shirkadda inay macaammiishooda u samayso qiime-dhimis ballaadhan oo sii socon doonto muddo lix bilood ah (Illaa bisha June ee 2012).
Sidoo kale waxa uu xusay inay sannad kasta qaban doonaan bakhtiyaa-nasiib ay abaal marinno ku bixinayaan, iyada oo la diiwaangelin doono qof kasta oo shirkadda wax ka iibsada, lana siin doono qoraallo damaanadqaad u ah. Mulkiiluhu waxa uu sheegay inay sidan u yeeleen si ay u dhiirrigelinayaan macaamiishooda iyo cid kasta oo macaammiil ku soo xidhaba.
Dadweynaha soo booqanaya goobta ay carwadu ka socoto ee Maansoor ayaa si gaar ah u soo dhoweeyay qiime-dhimista ballaadhan ee shirkadda AL- NUUR Furniture hirgelisay iyo muddada dheeraadka ah ee ay shirkaddu samaysay, iyada oo ay dadweyne badani durba isku diiwaangeliyeen macmiilnimada shirkadda.
Ugu dambaynna, Mulkiilaha Shirkaddu waxa uu dadweynaha u ballanqaadday inay sidii ay horeba uga barteen ay mar walba keeni doonaan qalab cusub oo casri ah, isla markaana tayo leh, iyagoo ahmiyada siinaya sidii ay u raaligelin lahaayeen macaamiisha shirkadda.
Shirkadda AL-Nuur Furniture oo sanadii u danbeeyay si weyn u talaabsatay, isla markaana isku balaadhisay Geeska Afrika ayaa keenta qalabka Guryaha iyo Aagabka Guryaha, Xafiisyada Go’gosha, Hurdada iyo dhamaan waxyaabaha loo adeegsado ee aan looga maarin nolosha gurayaha iyo adeegyada xafiisyada la hoos dhigo. Waxayna Al-Nuur waxqadkeeda iyo ganacsigeeda oo ah mid muqaalo iyo bilic weyn leh. Kusoo bandhigeen Carwadaa, taas oo Al-Nuur si weyn uga dhexmuuqatay.
Shirkadda ALNUUR waa shirkadda ugu weyn ee ka ganacsata agabka xafiisyada, guryaha iyo guud ahaanba Furnuture-ka oo xarunteeda ugu weyni ku taalo somaliland, balse ku fiday geeska Afrika. iyada oo wada-shaqaynna la leh shirkado badan oo Caalami ah, isla markaasna dalka ku iibisa agab casri oo tayadiisu sarrayso. Sidoo kale Al-Nuur kuma koobna inay dadka wax ka iibiso oo keliya, balse waxay door muhiim ah sanadii u danbeeyay ka qaadanaysay oo ay kaalin mug leh kaga jirtay taageerada bulshada jilicsan (sida agoomaha), taabbagelinta horumarka dhaqaale ee dalka iyo horumarinta adeegyada aasaasiga ah, iyada oo fursaddan qiime-dhimista ahina u muuqata daryeel kale oo ay shirkaddu u fidisay macaamiisheeda.
KUWII ILAAHNA KA GO”’AY GAALNIMONA SHEEGAN, By Ex- G/le Sare Omer Suleiman Ali Q/labaad